Maqal: Wariye Yaasha Gobolka Bari oo Tacsi u diray Eheladii Wariye Liibaan Qaran – SBC
Maqal: Wariye Yaasha Gobolka Bari oo Tacsi u diray Eheladii Wariye Liibaan Qaran
Posted by Webmaster on July 8, 2013 Comments
Saxafiyiinta ka howlgala gobolka Bari ayaa u tacsiyadeeyay eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday wariye Liibaan C/laahi Faarax (Liibaan Qaran) oo Habeen nimadii xalay kooxo hubeysan oo aan la garaneynin waxa ay yihiin ku toogteen gudaha magaalada Gaalkacyo .
Kulan ay maanta isugu yimaadeen wariye yaasha gobolka Bari ayaa waxa ay sidoo kale cambaareyn hawada ugu mariyeen dhinacyadii ka dambeeyay dilka wariyaha iyagoona ku tilmaamay in ay geysteen fal arxandaro ah aysanna ku liibaani doonin.
Waakuwan Wariyee yaasha Gobolka Bari oo Tacsi iyo cambaareyn soo jeedinaya,, Dhageyso RIIX AMA DAAR
Wariye Liibaan C/laahi Faarax liibaan qaran ayaa habeen nimadii xalay lagu dilay Magaalada Gaalkacyo waxaana rasaas ku furay kooxo aan la aqoonin waxa ay ahayeen, waxaana maanta lagu aasay qabuuro ku yaala magaalada Gaalkacyo.
Aaska wariyaha waxaa ka qeyb galay saxafiyiin eheladii iyo qarabaadiisa iyo dadkale oo isugu jiray masuuliyiin iyo dadweyne kale.
Ciidanka Police-ka gobolka Mudug ayaa iyaguna sheegay in ay ku guda jiraan baaritaan quseeya dilka wariyaha islamarkaana ay ku rajo weyn yihiin in ay wax cad ka soo saaraan .